Fanamarihana avy ao Kazakstana: Voromailala, famonoana otrikaretina ary COVID-19 · Global Voices teny Malagasy
Mametra ny fifandraisan'ireo foibe mifanalavitra ny fatrana, fa tsy vaksiny.
Voadika ny 30 Avrily 2020 18:53 GMT
Kianja Respublika ngazana ao Almaty, Kazakstana. Sary (c): Joanna Lillis. Nampiasaina teo ambany fahazoandàlana.
Tsy tena mbola nieritreritra ny momba azy ireo mihitsy aho. Raha tsy hoe angaha, fony izaho mbola kely, ny hanenjika azy ireny. Na amin'izao maha ray aman-dreny ahy izao, ny hiangavy ny zanako tsy hanenjika azy ireny.
Avy eo misy 30 amin-dry zareo maty amin'ny andro antoandro ka dia manokatra fanadihadiana ny Minisiteran'ny Ekôlôjia. Ary manomboka tsapanao ilay izy.
Mitsaingotsaingoka ny hoditrao.
Nihiboka efa maherin'ny iray volana izao ireo tanàna roa lehibe indrindra ao Kazakstana – Almaty sy Nur-Sultan.
Tato anatin'ny herinandro vitsy lasa, nanatevin-daharana azy ireo ihany koa ny ankamaroan'ireo vondron-tanàna goavana hafa, raha misy sampantsampan'io coronavirus vaovao io mivoatra saika manerana ilay firenena fahasivy lehibe indrindra maneran-tany.
Mametra ny fifandraisana amin'ireo foibe mifanalavitra ny fidadasiky ny fatrana, saingy hita mivaingana fa tsy vaksiny.
Tsara vintana ny fianakaviako tamin'ity fihibohana ity. Somary be velarana ihany ny trano fonenanay. Lasa manan-danja bebe kokoa ny metatra toradoa anatiny rehefa nakatona ny fidirana amin'ireo kilaometatra toradroa ivelany – zaridainam-panjakana, toerana filalaovana, faritra ho an'ny mpandeha an-tongotra. Anananay ireo loharano hiandrasana izany.
Ireo hafa ato Kazakstan kosa nefa dia tsia. Ny governemanta tsy refesi-mandidy ato Kazakstana dia tsy nanolo-tena afa-tsy ny hanome US$100 isam-bolana fotsiny ihany, ho anà olompirenena efatra tapitrisa tsy an'asa noho ny fihibohana. Betsaka nóho ny azon'ireo firenena Aziatika Afovoany manodidina omena izany, saingy mbola lavitry ny atao hoe ampy.
Voafintin'ity bitsika avy aminà mpanaogazety ao Kyrgyzstana mpifanolobodirindrina amin'i Kazakstana ity ny antsana misy eo amin'ny ampahan'ny mponina manan-katao, mpampiasa tambajotra sosialy, sy ny vahoaka tsy mampiasa Aterineto. Na dia i Kyrgyzstana aza no mahantra kokoa amin'izy roa, mbola mitombina foana io fanoharana io:
Etsy ankavia, misy mpampiasa Twitter mitaraina fa lany ny whisky ary mitombo ny lanjany mandritra ny fihibohana. Etsy ankavanana kosa ny ambin'ny mponina aty Kyrgyzstana.
Ho an'ireo governemanta anatin'ity faritra tsy refesi-mandidy ity, toa iankinan'ny aina ny hazakazaka hampihenana ny “courbe”.
Raha toa ka lasa mifanindran-dàlana ny safidy eo amin'ny fihanaky ny hanohanana sy ny fihanaky ny COVID-19 izay tsy voafehy, na ireo fitondrana izay nahatohitra ny tadio ara-toekarena tamin'ny 1990 aza dia hatahotra.
Raha toa ka namadibadika izay fomba mety hanamafisana ireo fepetra mandritra ny fihibohana sy ny tsy fifampikasokasohana ireo governemanta ao Eoropa, toa mampieritreritra kokoa ny valinteny eto.
Ary any amin'izay adinon'ny fanjakana, misy ireo tambajotran'olona mpanome vaovao hanampy.
Nisy vondrona WhatsApp antsoina hoe Action Committee, natsangan'ireo mpandrindra ny complexe résidentiel misy anay hanomezana ireo mponina ny vaovao farany momba ireo fepetra mandritra ny fihibohana, izay tsy ela dia nivoatra ho toerana iray matanjaka mangataka ny fampiharana azy ireo: Ahoana no ahasahian'ireo fianakaviana mampiasa ny famelàna azy hanary fako hirenireneny manodidina ny complexe, tsy indray, fa imbetsaka? Mandehandeha tsy manao arotava ny olona, tsy araka ny torohevitry ny governemanta! Hitanareo ve fa mbola milalao basketball ihany ny ankizy?!
Nanomboka teo, tonga nanara-maso ny complexe ny mpitandro filaminana sy ny miaramila ny ankabeazan'ireo maraina. Ary nanjavona noho izany ireo mpilalao basketball izay ny lalaony no nanome ny tokontany sarintsarinà tontolo mahazatra.
Nirehareha ireo manampahefana tao Nur-Sultan, renivohitr'i Kazakstana, fa ny tambajotran-kameràn-dry zareo vita Sinoa mpanara-maso ny làlana dia hitarika ny masony any amin'ireo mpandeha mba hahazoany antoka fa tsy mandika ny fihibohana ireto farany.
Kanefa dia mbola tsy vitan'ny governemanta ihany ny nisoroka ny taham-pifindràna avo teo amin'ireo mpitsabo mitarika — raha ny marina dia ny 30 isan-jaton'ny tranganà COVID-19 2.300 hita tao amin'ny firenena dia mpitsaboa avokoa.
Matetika dia zara raha misy ny fitaovana fiarovan-tena. Ka rehefa nanome tsiny ireo mpitsabo ny lehiben'ny epidemiolojistan'i Almaty noho ny fidiran'ny aretina tany amin'ireto farany, dia nitroatra ireo dokotera sy mpanampy ny dokotera, nandrahona ny hitory azy. Nahazo fanohanana marobe avy amin'ny vahoaka ry zareo. Ny 18 Aprily, rametra-pialàna izy.
Nanomboka teo dia niaiky ny filoha Kassym-Jomart Tokayev fa zara raha nojerena ny amin'ireo mpikambana maro anaty toeram-pitsaboana, ny governemantany izay sady miatrika olana saropady iray fanampiny amin'ny fidabohana saika manontolon'ny vidin'ny solitany,
Toa mitovy aminà fanatanjahana hozatra ny famonoana otrikaretina.
Residents are warned it is unsafe for them to go outside for up to five hours after the spaces are disinfected
Tonga indroa mandeha isan-kerinandro anatin'ireo efitrano fonenana ny lehilahy manao arotava sy aroakanjo lava, manambara ny fahatongavany aminà famoahampeo goavana ary mamono ny otrikaretina rehetra eny amin'ny làlany. Maro amin'ireo toerana diovindry zareo — toerana filalaovana, zaridainam-panjakana, toerana ho an'ny mpandeha an-tongotra — no zara raha misy mampiasa na tsy misy mampiasa mihitsy aza hatramin'ny nampiharana ny fihibohana. Kanefa, misy ilàvana azy io fampiharana io. Ampitandremana ireo mponina fa mampidi-doza azy ireo ny mivoaka mandritra ny adiny dimy aorian'ny famonoana ny otrikaretina amin'ireo toerana ireo: #MijanonaAoAnTrano.
Tsy mahazo ireo fifampitondràna ireo ny voromailala. Tany amin'ny voalohandohan'ny fihibohana tany, feno sary mandona ahitàna ireo biby ireo mitsitra maty anatinà zaridainam-panjakana iray malaza ny tambajotra sosialy. Nanao tombana vonjimaika ny Minisiteran'ny Ekolojia nilaza fa voapoizina izy ireo, ary nivoady ny hanara-maso izany. Mbola tsy nisy izany, saingy nihalefy ny misitery. Matin'ny famonoana otrikaretina ireo voromailala 30 ireo.